शीर्ष १० उत्कृष्ट बजेट वायरलेस हेडफोन २०२२ - Victor Mochere
by पुजा शाह
के तपाईलाई ती दिनहरू याद छ जब तपाई हेडफोनको सेटसँग जोडिएको केबलहरूद्वारा संगीत सुन्ने उपकरणमा बाँधिएको हुन्छ? ती दिनहरू पूर्ण रूपमा बितिसकेका छन्, तर तपाईंले अझै पनि तारयुक्त हेडफोनको क्र्याकिंग टुक्रा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ (यदि तपाईंलाई मनपर्छ भने)। ताररहित विविधता आजकल मानिसहरूको लागि शीर्ष विकल्प हो। यसले तपाईंको बाटोमा कुनै पनि तार झुन्ड्याउँदैन वरिपरि घुम्न लचिलोपन दिन्छ। त्यसैले, तपाईं आफ्नो मनपर्ने संगीत थप स्वतन्त्रता संग ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै विकल्पहरू उपलब्ध हुँदा, सही जोडी छनौट गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
यहाँ शीर्ष 10 उत्कृष्ट सस्तो वायरलेस हेडफोनहरू छन्।
२. Mpow ०५९
5. लेभिन हाई-फाई डीप बास
7. iJoy म्याट
10. रचनात्मक आउटलियर
यदि तपाईं ओभर-इयर डिजाइनको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले निश्चित रूपमा यी वायरलेस हेडफोनहरू पाउनु पर्छ। तिनीहरू इयरफोनहरूमा दोहोरो 40mm ड्राइभरहरूको साथ Hifi स्टेरियो ध्वनिको साथ आउँछन्। अरु के छ त? तिनीहरूसँग सक्रिय-शोर-घटना (ANC) छ जसले अनावश्यक आवाजलाई बाहिर राख्छ। राम्रो पक्ष यो हो कि तिनीहरूसँग मेमोरी कुशन इयर फोम र उच्च समायोज्य हेडब्यान्डको साथ आरामदायक डिजाइन छ। यी हेडफोनहरू प्रयोग गर्दा, तपाईंले 40 घण्टा चार्ज गरेपछि4घण्टा प्लेब्याक समय पाउनुहुनेछ।
यी हेडफोनहरूमा ओभर-इयर डिजाइन पनि छ। तिनीहरू निष्क्रिय आवाज रद्द गर्न सुसज्जित छन् जुन हेडफोनको आवाज सन्तुलनमा उपयोगी छ। यसको मेमोरी प्रोटीन इयर कुशन र समायोज्य हेडब्यान्डले अधिकतम स्तरको आराम प्रदान गर्दछ। तपाईले तारयुक्त र ताररहित मोडमा काम गर्ने विकल्प पाउनुहुनेछ। ताररहित मोडको साथ, तपाईंको हेडफोनहरू २० घण्टासम्म रहनेछन्। थप सुविधा प्रदान गर्न, तिनीहरू ट्रान्जिटको समयमा उनीहरूको सुरक्षाको लागि फोल्ड गर्न मिल्ने डिजाइन र बोक्ने झोलाको साथ आउँछन्।
यी अन-इयर वायरलेस डिजाइन हेडफोनहरू ठूला र शक्तिशाली छन्। तिनीहरूसँग आरामको स्थिति छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सुविधाको स्तर थप्छ। तिनीहरू फोल्ड गर्न मिल्ने, वजनमा हल्का, र तपाईंको खुशीको लागि कम्प्याक्ट छन्। ब्याट्री एक पटक चार्जमा 11 घण्टा सम्म टिक्छ। तिनीहरूसँग कल र संगीतको लागि निर्मित माइक र बटन नियन्त्रणहरू छन्। तिनीहरू अतिरिक्त नरम कान कुशन र थप आराम दिनको लागि समायोज्य हेडब्यान्डको साथ आउँछन्।
यी ओभर-इयर बजेट हेडफोनहरूले मूल्यको लागि उत्तम मूल्य प्रदान गर्दछ। यी सक्रिय-शोर रद्दको साथ तैनात छन् जसले उद्योग-अग्रणी ध्वनि गुणस्तर र परिशुद्धता प्रदान गर्दछ। ध्वनि 240mm ड्राइभरहरू मार्फत आउँछ जसले गतिशील ध्वनि गुणस्तर प्रदान गर्दछ। एक समायोज्य हेडब्यान्ड र मेमोरी प्रोटीन इयर कुशनको साथ, तपाईंले आरामको उच्चतम स्तरको अनुभव गर्नुहुनेछ। यी इयरफोनहरूमा ब्लुटुथ जडान ३३ फिट सम्म छ। तपाईंले यी हेडफोनहरूसँगै हवाइजहाज एडाप्टर र सुरक्षात्मक केस पाउनुहुनेछ।
यदि तपाइँ साँच्चै हेडफोनहरूमा गहिरो बास सम्भावनाहरू मनपर्छ भने, तपाइँको खोज यहाँ समाप्त हुन्छ। लेभिन बजेट हेडफोनहरू सही विकल्प हुन्। तपाईंले 40mm ड्राइभरहरू मार्फत अद्भुत ध्वनि गुणस्तर पम्पिङ पाउनुहुनेछ। यी हेडफोनहरूमा ब्लुटुथ 4.1 छ जसले कम ड्रप कल वा संगीत स्किपको साथ सिमलेस जडान प्रदान गर्दछ। समायोज्य हेडब्यान्ड र मेमोरी प्रोटीन इयर कुशनको कारण तिनीहरू लगाउन सहज छन्। यदि तपाईं लामो अवधिको लागि सुन्न चाहनुहुन्छ भने, यी हेडफोनहरू 15 घण्टासम्म टिक्छन्। बिल्ट-इन माइक र बटन नियन्त्रणहरूसँग सुसज्जित, तपाईंले सजिलो नेभिगेसन अनुभव गर्नुहुनेछ।
यदि तपाईं मेकानिकल डिजाइनको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, यी हेडफोनहरू सही छनौट हुनेछन्। तिनीहरू बाँकी बजेट हेडफोनहरूबाट अद्वितीय छन्। ५ वटा छुट्टै EQ मोडहरूसँग, तपाईंले प्रशस्त सन्तुलित अनुभव प्राप्त गर्नुहुनेछ। तिनीहरूको मेमोरी प्रोटीन कान कुशनहरूले मानव कानको बनावटको नक्कल गर्दछ जसले आरामको ठूलो स्तर प्रदान गर्दछ। तपाईंलाई राम्रो सुन्ने अनुभव प्रदान गर्न, तिनीहरू एक आवाज-पृथक सुविधाको साथ आउँछन्। यदि तपाइँ वायर्ड मोडको लागि रोज्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई ब्याट्री रिचार्ज गर्न आवश्यक छैन। तर, यदि तपाइँ ब्लुटुथमा जाने छनौट गर्नुहुन्छ भने, ब्याट्री एकल चार्जमा5घण्टा सम्म चल्नेछ।
यी ओभर-इयर हेडफोनहरूले आराम र राम्रो ध्वनि गुणस्तर दुवै प्रदान गर्दछ। तिनीहरूसँग ठ्याक्कै सन्तुलित ध्वनि छ जुन बासमा समात्न सक्दैन। तिनीहरू सक्रिय आवाज रद्द गर्ने सुविधाको साथ आउँदैनन्। तर इयरकपहरू अनावश्यक आवाज रोक्न टाउकोमा आरामसँग बस्छन्। तपाईंले इयरफोनहरूमा संगीत नियन्त्रण बटनहरू वा रिप्लेहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। लचिलो स्न्याग र समायोज्य हेडब्यान्डको साथ, तपाईंले आफ्नो सुन्न भरि आरामको ठूलो स्तरको अनुभव गर्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ आकर्षक डिजाइन मनपर्छ भने, तपाइँ यी हेडफोनहरूसँग जानुपर्छ। तिनीहरू दुवै भविष्यवादी र उपस्थितिमा चतुर छन्। CSR चिप्स र डुअल 40mm चालकहरूले उत्कृष्ट ध्वनि गुणस्तर उत्पादन गर्छन्। तपाईं 1.5-घण्टा चार्जमा दिनभर संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ। यी हेडफोनहरूसँग प्लेब्याक र कल समयको अद्भुत 25 घण्टा छ। ब्लुटुथ 4.2 को साथ, तपाइँ कम ड्रप कलहरू र संगीत स्किपको साथमा सिमलेस जडानको मजा लिन सक्नुहुन्छ। बिल्ट-इन माइक र बटनहरूले तपाइँलाई तपाइँको यन्त्र नछोइकन नियन्त्रण गर्न लाभ उठाउँदछ। तिनीहरूसँग नरम कानको कुशन र समायोज्य हेडब्यान्ड पनि छ।
कहिलेकाहीँ तपाईं बाहिरी संसारबाट अलग हुन चाहनुहुन्छ र आफैलाई एक मधुर उत्कृष्ट कृतिमा डुबाउन चाहनुहुन्छ। त्यसका लागि यी हेडफोनहरू उपयुक्त छन्। तिनीहरूले 40mm ड्राइभरहरू र CSR8635 चिपहरू मार्फत उत्कृष्ट ध्वनि गुणस्तर उत्पादन गर्छन्। इयरफोनमा बिल्ट-इन बटन र माइकको साथ, कल र संगीतको समयमा ह्यान्ड्स-फ्री कार्यहरू सम्भव छन्। तिनीहरूको ब्लुटुथ जडान निर्बाध छ र ब्याट्री एकल चार्ज पछि 20 घण्टा सम्म रहन्छ।
यी हेडफोनहरूमा एक चतुर र कालो डिजाइन छ जुन बाँकी भन्दा फरक छ। यदि तपाइँ ब्याट्री चार्ज नगरी संगीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने, एक वायर्ड-अप मोडले तपाइँलाई त्यसो गर्न लगाउनेछ। यद्यपि, ब्लुटुथ मोडमा, ब्याट्री 13 घण्टा सम्म रहन्छ। तपाईं कुनै पनि अवरोध बिना दिनभर सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले ओभर-इयर डिजाइनबाट गुणस्तरीय आवाज सुन्नुहुनेछ। तिनीहरू कान कुशन र एक समायोज्य हेडब्यान्डको साथ आउँछन् जसले सम्भव सबैभन्दा ठूलो आराम प्रदान गर्दछ। तिनीहरू कानमा आरामसँग फिट हुँदा, कुशनहरूले बाहिरी आवाजलाई भित्र आउनबाट रोक्छ।
माथि उल्लिखित सबै हेडफोनहरू उत्कृष्ट सुविधाहरूले सुसज्जित छन् र लागत-प्रभावी मूल्य निर्धारण प्रस्ताव गर्छन्। तपाईंले आफ्नो आवश्यकताहरू मूल्याङ्कन गरेर कुनै पनि छनौट गर्नुपर्छ। हामी आशा गर्छौं कि तपाईंले यो पोष्ट पढेर आनन्द लिनुहुन्छ र तपाईंको बजेट भित्र उत्तम हेडफोनहरू छान्नुहोस्।
कसरी एक सफल उद्यमी नेटवर्किङ कार्यक्रम होस्ट गर्ने